असार १४ गतेको स्थानीय निर्वाचन कुनैपनि हालतमा सार्न नसकिने प्रमुुख निर्वाचनको भनाई (२०७४ ज्येष्ड २९, सोमवार)
प्रमुुख निर्वाचन आयुुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले असार १४ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा सार्न नसकिने बताएका छन् ।
सोमबार विराटनगरमा सन्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले निर्वाचन आयोगको पनि निश्चित सीमा हुने भन्दै घोषित मिति परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।
उनले सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रहसमेत गरे ।
सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुुने वातावरण बनाउन दलहरुकै सहमतिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन-कानुुन संशोधन गरिसकेको र मितिसमेत पर सार्दै गएकाले अब पुनः मिति सार्र्ने कुुरा मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । इमेजखबरमा समाचार छ ।